Jeff Goldblum wuxuu jeclaan lahaa inuu sameeyo filim kale 'Fly' - iHorror
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh Jeff Goldblum Wuxuu Jeclaan Lahaa Inuu Sameeyo Filim 'Duuliye' Kale
Jeff Goldblum Wuxuu Jeclaan Lahaa Inuu Sameeyo Filim 'Duuliye' Kale
by Michael Nijaar June 17, 2018
Qof kastaa wuxuu jecel yahay Jeff Goldblum, oo maxaa diidaya, waa halyeey. La jecel yahay labadaba jilitaankiisa jilitaankiisa iyo sida guud ee loo jecel yahay, Goldblum wuxuu ku faanaa hal cadaab oo xirfad ah, oo ay ku jiraan filimo kala duwan Jurassic Park, Maalinta Madax-bannaanida, iyo Thor: Ragnarok.
Si kastaba ha noqotee taageerayaasha argagaxa leh, Goldblum waxay u badan tahay in had iyo jeer lagu xasuusto kaalintiisii ​​hoggaamineed ee David Cronenberg ee cajiibka ahayd ee 1986 Duulaanka. Soo bandhigida qaar ka mid ah saameynaha gaarka ah ee wax ku oolka ah ee taariikhda, Fly waxay cadeyneysaa in dib u habeyn mararka qaar xukumi karto.
Filimkaas, Goldblum dabcan wuxuu ciyaarayaa saynisyahan Seth Brundle, oo allifay xirmo telefishinnada loo gudbiyo oo u muuqda inay noqdaan horumar cilmiyeed. Nasiib darrose, wuxuu ku dhammeeyaa inuu ku midoobo DNA-giisa duulimaad khaldan, taasoo horseedaysa cabsi qof walba oo ku lug leh.
Inkastoo duuli saamaynta abuuraha Chris Walas wuxuu toos u hagaajin lahaa taxaddar ku filan oo ku habboon 1989-kii Duuli II, Goldblum ayaa goor dhaweyd shaacisay wareysiga lala yeeshay Qulqulka Dhiiga in uu noqon lahaa in ka badan diyaar u ah inuu ka muuqdo cusub duuli qayb ka mid ah
Halka Seth Brundle uusan badbaadin karin Duuliye, Goldblum wuxuu sheegay inuu ku faraxsanaan lahaa inuu ciyaaro qaraabo aan horay loo soo sheegin oo Brundle ah. Iyadoo la tixgelinayo sida weyn ee Goldblum ugu jiray Duuliye, waa shakiyi taageerayaasha inay su'aal weydiin doonaan wax kasta oo ay ku qaadatay inay dib ugu soo celiyaan xorriyadda.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qabasho. Sababta ugu weyn ee Jeff Goldblum uu u doonayo inuu ku soo laabto ayaa ah fursada uu kula shaqeyn karo markale Cronenberg, waana da ’ilaa laga soo bilaabo markii Cronenberg uu sameeyay filim cabsi leh. Hase yeeshe, waa fikrad aad u xiiso badan in laga fikiro, waana wada jeclaan karnaa inay dhacdo.
James Wan Soosaarida 'Arachnophobia' Remake
Fede Alvarez wuxuu yiri wuxuu sameyn doonaa 'Shar shar leh' hadii Uruguay ku guuleysato Koobka Aduunka